Shirkii Beelaha Ciise Muuse oo ka furmay tuulada Dubur ee Degmada Sheekh | Somaliland.Org
September 29, 2011	Sheekh (Somaliland.Org)- Shir Beelaha Ciise Muuse ay kaga hadlayaan horumarinta danaha beelahooda ayaa maanta ka furmay tuulada Dubur ee degmada Sheekh ee gobolka Saaxil, waxaana ka qeyb galay boqolaal xubnood oo ka mid ah waxgaradka, cuqaasha, salaadiinta iyo siyaasiyiinta beelahaasi.
Shirkan oo loogu magac daray dan iyo duco waxa ka qeyb galay siyaasiyiin iyo aqoonyahano ka soo jeeda beeshaasi.Waxa furitaankii shirka ka hadlay Wasiirka Wasaarada Qorshaynta Somaliland Md. Sacad Cali Shire waxaanu sheegay in shirkani uu yahay mid beeshu ay kaga arrinsanayso horumarka bulshadeeda, waxaanu ku dooday in aanu ahayn shir loogu tashanayo cid gaar ah oo laga leeyahay ahdaaf siyaasadeed oo guracan.
Wasiirku waxa uu sheegay inaanay xukuumada uu ka tirsan yahay wax carqalad ah ku samayn shirkan.Md. Sacad Cali Shire waxa uu intaasi ku daray in shirkan uu rajaynayo inay ka soo baxaan go’aamo ka turjuma danaha iyo horumarka beelaha Ciise Muuse.
Guddoomiye Ku xigeenka xisbiga UDUB Md. Axmed Yuusuf Yaasiin, oo ka hadlay shirkaasi ayaa sheegay inuu soo dhawaynayo shirkan oo uu ka rajaynayo inay ka soo baxaan go’aamo waxtar u ah dalka.
“Waxa la yidhaahdaa Cigaal iyo Axmed-ba way dayaceen Ciise Muuse, waxaan idiin sheegayaa Cigaal waxa uu dhisayay oo uu hoosta ka soo bilaabay dal burbursan. Anaguna (xukuumadii hore) waxaanu soo oodaynay reerkii uu dhisay oo baylahsan,”ayuu tilmaamay Axmed Yuusuf Yaasiin.
Waxa kale oo ka hadlay shirkan Suldaan Maxamuud Axmed Sheekh, oo sheegay inaanu shirkani ahayn mid lagu duminayo qaranimada Somaliland, waxase uu xusay inay beeshiisu kaga hadlayso danahooda.
Sidoo kale, waxa ka hadlay shirkaasi oo socon doona dhawr maalmood Suldaan Xasan Suldaan C/Raxmaan Suldaan Cabdilaahi, Muuse dalab iyo Wasiirkii hore ee waxbarashada Xasan X. Maxamuud Warsame.
Previous PostFaysal Cali waraabe oo ka hadlay cilaaqaadkii ka dhaxeeyay Gaani Iyo fadeexadda ka haysata Kiiskii UFONext PostEedo Xisbiga UCID u Jeediyay Xukuumada oo beenowday iyo shirkii dubur oo furmay	Blog